Womens Microsuede Moccasin Slipper ngeRibhoni Bow - Goodao Technology Co, Ltd.
Abafazi iMicrosuede Moccasin Slipper ngeRibhoni Bow
Umzekelo NO. NumBLM16050
Umbala: TAN / NAVY ABANYE
Ubungakanani: Abasetyhini6-11 #
Uphawu lwentengiso: B-LAND okanye abanye
Iphakheji yokuThutha: ICarton
Izibuko: Shanghai / Ningbo
I-moccasin yethu yabafazi yakhelwe imfashini kunye nokuthambisa i-moccasin slippers eqinisekileyo yokuhambisa yonke imihla. Yenzelwe intuthuzelo, i-Foam midsole ethambileyo inceda ukubonelela ngeenyawo ezingaphantsi, ngelixa amagwebu asebenzayo asemabhedeni aphezulu enza amava athambileyo. Isoft fit engathinteli ukusebenza, iinyawo zakho ziya kukubulela ngokunxiba esi sihlangu.
I-Ultra-Soft Wool-Like Plush Fleece Lining: Kulula ukutyibilika kuyilo, kunye nomgangatho ophezulu kunye nentuthuzelo eyenziwe ngulusu olucekeceke olwenziwe ngabantu olubandakanya iinyawo zakho kakuhle kwaye lunika intuthuzelo ethuthuzelayo.
Ihlala ixesha elide kunye ne-Anti-Skid yerabha Sole: Ubunzima bokukhanya kunye nerabha yomelele yodwa yenza ukuba ii-suede slippers ezincinci zilungele usapho lwangaphakathi nangaphandle. I-anti-slip outsole ivumela ukunyathela ngaphandle kwegumbi lokulala. Amanyathelo akho ngamanyathelo aya kuba mnandi ngokungaginyisi mathe ezantsi.
Ubunzima beMemori ye-Foam Insole: I-suede encinci enesitayile esiphakamileyo engenazo i-slippers zangasemva enefreyimu ephezulu yenkumbulo ebumba ngenene iinyawo zakho kwaye igcine imilo.
Izitayile kunye nokhetho lombala: Esi sitayile sityibilikisi senzelwe amadoda anemibala eyahlukeneyo. Ifumaneka kukhetho lwaBasetyhini oluMnyama kunye newayini. Yenziwe ngoboya obufana noboya obuphezulu kunye nokuxinana okuphezulu kokuxinana, ezi slippers zinokuziva ngathi zincinci ekuqaleni kwaye emva koko ziya kolula kancinci kulungelelwaniso olwenziwe ngokwezifiso emva kokunxiba okuninzi.
Iimbono eziThathwe zaya kwiMigangatho ePhakamileyo ye-Ultra: I-ULTRAIDEAS izama ukubonelela umthengi ngamnye ngenkonzo engcono kunye nemveliso ukusukela ekuqaleni kuye esiphelweni. Ngoyilo olulula kodwa izinto ezikumgangatho ophezulu, ezi slippers zinokuhambelana kakuhle nokunxiba kwakho kwigumbi lokuphumla, iipijama, iingubo njl.
● Inkumbulo amagwebu ebhedi
● Microfiber ephezulu
● Uluhlu lweTerry / plush
● Irabha yangaphandle
● Umgangatho ophezulu weCow suede ephezulu, unokwenziwa ngombala ohlukileyo.
● Singavelisa izinto ezahlukeneyo zelining zale ndlela.
● Hombisa isaphetha seribhoni kwi-vamp.
● Imveliso engakumbi yokuhlaziywa kwemifanekiso:
Simele into enkulu kunezihlangu. Senza ngokufanelekileyo ngabantu kunye neplanethi. Sisonke, siqhuba utshintsho olunentsingiselo kuluntu kwihlabathi liphela. Siya kuyo.
Zokuthunyelwa & Intlawulo:
Ixesha leSampula Iintsuku 7-15
Ixesha lokukhokhela Iintsuku 35-45
FOB Izibuko SHANGHAI / NINGBO
Intlawulo T / T, L / C EBONWENI,
Eyona njongo yethu iphambili kukunikezela abathengi bethu ubudlelwane obunzulu noxanduva lweshishini, ukuhambisa ingqalelo yomntu kubo bonke yeCowsuede Slippers Moccasin, Onke amaxabiso axhomekeke kubungakanani beodolo yakho; Sikwabonelela ngomboneleli we-OEM omangalisayo kwiimveliso ezininzi ezaziwayo.
Silandela ikhondo lomsebenzi kunye neminqweno yesizukulwana sethu sabadala, kwaye besikulangazelela ukuvula ithemba elitsha kule nkalo, Sigxininisa ku "Intembeko, ubuGcisa, iNtsebenziswano yeWin-win", kuba sinogcino oluluqilima, amaqabane agqwesileyo ngemigca yokuqhubela phambili yokuvelisa, amandla amaninzi obuchwephesha, inkqubo yokuhlola esemgangathweni kunye namandla okuvelisa.
Egqithileyo Abasetyhini abaDumileyo beCowsuede Clog Slipper ekuMgangatho oPhakamileyo weLayini ene-Anti Slipper Outsole
Okulandelayo: Umtya wesandla Umgangatho oPhezulu weCowsuede Venetian Slipper Comfort Footbed kunye neAnti Flexible Outsole Shoes zangaphakathi
Izithambisi eziGreen Moccasin
Izidenge zeMoccasin Slippers
I-Moccasin Male Slippers
Ukufudumala kweMoccasin Slippers
Izihluzi zewulu zeMoccasin
Umtya wesandla Umgangatho ophezulu weCowsuede Slip yaseVenetian ...
Ukufika New Fashion Ukufudumala Ubusika Casual Ngokwenene ...
Abasetyhini Cozy Inkumbi Slippers Fuzzy W ...
Izicathulo zeWms Leather Shoes Comfort Fuax Fur Slipper
Amadoda aDumileyo eCowsuede Venetian Slipper Moccasin I ...